Adguard लाइसेन्स प्रमुख - निःशुल्क डाउनलोड प्रिमियम 6.1 संस्करण - Softkelo - असीमित सफ्टवेयर पाउन, चर्किएको & भाडे
घर » प्रिमियम चर्किएको » Adguard लाइसेन्स प्रमुख – निःशुल्क डाउनलोड प्रिमियम 6.1 संस्करण
Adguard लाइसेन्स प्रमुख – निःशुल्क डाउनलोड प्रिमियम 6.1 संस्करण
द्वारा softkelo | सेप्टेम्बर 5, 2017
Adguard लाइसेन्स प्रमुख हटान विज्ञापन र विज्ञापनहरु वेबसाइटहरूबाट लागि प्रिमियम सफ्टवेयर छ. Adguard प्रमुख पनि फिसिङ लिंक र मालवेयर सामग्री सुरक्षित गर्न तपाईंलाई मदत.
विविध अनलाइन संरचना छोटो यात्रा पछि, एक अप stoning राख्न विभिन्न विज्ञापन हाजिर विफल हुन सक्दैन. ती विज्ञापनहरू वेब पृष्ठमा वेब पेज देखि एक उपभोक्ता पालना, को अनुगमन यो विचार गर्न सबै धन्यवाद विज्ञापन को आकृति रूपमा व्यवसाय उपयोग गरिएको छ. Windows वा म्याक चलिरहेको प्रणाली मा कि नगर्ने, विज्ञापनहरु धेरै लोकप्रिय छन्. त्यो किन चिल्लो विकसित adguard मा प्राथमिक कारण हो. उत्पादन विज्ञापनहरु को माध्यम द्वारा अवरोध विरुद्ध आफ्नो अनलाइन खेल जोगाउन काम गर्दछ.
छैन सरल यो सिस्टम विज्ञापनहरु blockading लागि विकसित छ, तर पनि सामग्री फिसिङ लागि सुलभ उपकरण हो र एक अभिभावकको रूपमा विशेषता परिमार्जन. विशेष, तीन मोड्युलहरू अप adguard सफ्टवेयर बनाउन. त्यो adguard छ, antiphishing, र अभिभावकको manipulates.
डाउनलोड adguard लाइसेन्स प्रमुख
Adguard लाइसेन्स प्रमुख
को broadest अर्थमा मा, जीवनकालमा सक्रियता प्रमुख संग adguard यसको ग्राहकहरु घर Windows को लागि adguard बीच चयन दिन्छ, म्याकको लागि एन्ड्रोइड लागि adguard र adguard. जबकि म्याक र स्याउ को चलिरहेको प्रणाली को safest को एक हो, तिनीहरू पनि विज्ञापनहरु को माध्यम द्वारा धम्की सामना.
विज्ञापन अवरुद्ध, ब्यानरहरू र pics देखि वर्गीकृत विज्ञापन अन्य शैलीहरू
एक फिसिङ उपकरणको रूपमा, यो सिस्टम तिनीहरू अनलाइन धम्की संग डोमेन घुम्दै हुन सक्छ ग्राहकहरु चेतावनी काम गर्दछ. थप त, कुनै पनि शङ्कास्पद वेब साइटबाट adguard ब्लक अनुरोध
को adware बाहिर फिल्टर, कार्यक्रम adware आक्रमण विरुद्ध सुरक्षा को लागि सजिला उपकरण छ
सेल ग्याजेटहरू देखि विज्ञापनहरु Blockading
गर्म स्थान हटाइ मुक्त ब्यान्डविथ सीमा सुरक्षा
एक अभिभावकको नियन्त्रण उपकरणको रूपमा, adguard बच्चाहरु द्वारा गर्न भर्ना रही देखि निश्चित वेब साइटहरु ब्लक गर्न काम गर्दछ
विस्तार अवरुद्ध हुन सक्ने उपयोगी विज्ञापनहरु अवरोध नगर्दा लागि उपयोग
'जस्तै' र 'Tweet' बटन को विविध सामाजिक मिडिया हटाइ जो वेब साइटहरूमा साधारण हुन सक्छ
अनधिकृत पहुँच को अनुगमन.
सजिलो र सहज व्यक्ति इन्टरफेस
पनि भिडियो विज्ञापन सहित विज्ञापन को बदनाम ब्लक गर्न चित्रहरु
हल्का; हाल थप संस्करण प्रयोगकर्ताको प्रोसेसर धेरै सानो प्रभाव
सेलुलर ग्याजेटहरू अनुकूलता
लगातार मिति फिल्टर सम्म
अनुकूलित अभिभावकको नियन्त्रण
स्थापना adguard फाइदाको:
adguard स्थापना पहिलो-दर लाभ को एक यो सबै ब्राउजरहरु टाढा बिल्कुल दिमाग जस्तै भन्ने छ. तिनीहरूले सफारी समावेश, मोजिला, क्रोम, नेट अन्वेषक, Yandex ब्राउजर र प्रशस्त थप दुर्लभ व्यक्तिहरूलाई सहित. Adguard स्ट्यान्ड आवेदन छ र यसरी efficaciously यस्तो ब्राउजरहरू देखि विज्ञापन समाप्त.
Adguard प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइट जोखिमपूर्ण छ वा अब कि सोचिरहनुभएको भरोसा तथ्य को इन्टरनेट. यो मात्रा गर्न, को wot नियमित अद्यावधिक.
adguard मोडेल मा ल्याए मा गरिएका कि अभिभावकको परिमार्जन समारोह6अधिकतम पूरा मध्ये एक छ. बच्चाहरु बन्द अवरुद्ध एक सेन्सर रूपमा विशेषता काम बच्चाहरु लागि अनुपयुक्त रूपमा मानिन्छ हुन सक्छ कि व्यक्तिगत साइटहरू वा वेब साइटहरूमा प्रविष्टि को अधिकार प्राप्त.
adguard हरेक अन्य लाभ यो एक विरोधी-फिसिङ मोड्युल छ छ. विरोधी-फिसिङ मोड्युल संग, प्रयोगकर्ताहरूको ल्यापटप मालवेयर र स्पाइवेयर समावेश लाइन धम्की मा एक विस्तृत विविधता देखि सुरक्षित छ. यसबाहेक, विरोधी-फिसिङ मोड्युल डेटाबेस प्राय ब्रान्ड नयाँ भाइरस र ठगी encompass गर्न इरादा अद्यावधिक छ.
ठूलो त, adguard ब्लक पहिले विज्ञापन तिनीहरूले लोड गर्न सक्षम छन् भन्दा. यसलाई लोड हुँदासम्म सफ्टवेयर विधि एउटा वेब पेज डिजाइन गरिएको छ. फलस्वरूप, को Advert कोड लोड केही बिन्दुमा पत्ता हटाइएको छ. बाहेकलाई, अन्य यस्तै व्यापारिक जस्तै, adguard हा सम्भावित ओ विज्ञापन सबै प्रकारका उन्मुक्ति.
तपाईंलाई मनपर्न सक्छ: KMSPICO विन्डोज 10 - नि: शुल्क डाउनलोड प्रो प्रवर्तक
म्याकको लागि adguard लागि, कार्यक्रम राम्रो देखि सुरु Mac OS को संस्करण सबै मेल खाने छ 10.7 संस्करण
व्यापक ग्राहक समर्थन; आवेदन भित्र अदालत अवस्थामा पठाउने, मंच मा हामीलाई पृष्ठ सम्पर्क
त्यस्तै, adguard को अंग्रेजी फिल्टर समावेश Advert फिल्टर एक गहिराई मा सूचीकरण समावेश, डच फिल्टर, फ्रान्सेली फिल्टर बाहिर, स्पष्ट बाहिर सामाजिक मिडिया, स्पाइवेयर बाहिर खाली. कारण बहुभाषी फिल्टर गर्न, कार्यक्रम विभिन्न भाषाहरूको वेबसाइटहरूबाट विज्ञापन छुटकारा रही समर्थन
पछि, adguard लाइसेन्स प्रमुख सबैभन्दा प्रभावकारी छैन व्यक्तिको कम्प्युटर मा वेबसाइटहरु मा विज्ञापन तर पनि प्याकेजहरू नामेट.
adguard र प्रतियोगी व्यापारिक बीचमा विशाल भेरिएसनहरूमा
प्रमुख, adguard ब्राउजर एक्सटेन्सन रूपमा कार्य अन्य तुलना व्यापारिक विपरीत स्ट्यान्ड सफ्टवेयर छ
दोश्रो, तपाईं आफ्नो आफ्नै फिल्टर समावेश गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फिल्टर ग्राहकहरु फिल्टर व्यक्तिगत सक्नुहुन्छ. यो तुलना कार्यक्रम संग सम्भव छ
ढिलो होस् वा चाँडो, adguard कि अन्य व्यापारिक धड्किन्छ यो Advert फिल्टरिङ र वेब पेज कोड फिल्टरिङ प्रयोग त विज्ञापन dam बनाउँछ अघि पनि सकिनँ लोड.
समर्थित सञ्चालन प्रणाली
राम को कम्तिमा 512MB मा
50 एमबी निःशुल्क हार्ड डिस्क स्पेस
← KMSPICO विन्डोज 10 – निःशुल्क डाउनलोड प्रो प्रवर्तक नर्टन प्रमुख कोड – डाउनलोड फ्री इन्टरनेट सुरक्षा उत्पादन 2016 →